ဂါနည်းဂါဟန် မြန်မာပြည်ဖြစ် လာဘ်ပေးနည်းအဖုံဖုံ
အစိုးရ အရာရှိ၊ ဝန်ထမ်းများ လစာ ဝင်ငွေ မလောက်ငသည့်ကြားမှပင် ယခင် အစိုးရ အဆက်ဆက် မီလီယံနာ ဝန်ကြီး၊ ဝန်လေး၊ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း များစွာကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘာတွေ သယ်လာလဲ
လုပ်ငန်းရှင်များ မျှော်လင့်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ထွက်ရှိလာသည်။
ကမ္ဘာကျော် သမီးတော်များ (အက်ဒါ မူဆိုလိုနီ)
မူဆိုလိုနီသည် သမီးလေး အက်ဒါကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ သမီးလေးကြောင့် သူ၏ အရိုင်းစိတ်များလည်း ပျော့ပျောင်းနူးညံ့လာခဲ့ရသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့ပြင် သမီးအနာဂတ် အတွက်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မွေးကင်းစ ရက်ပိုင်းအရွယ် သမီးလေးကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ညအိပ်လျှင်ပင် အနားတွင် ထားအိပ်သည် ဟုဆိုကြသည်။ သမီးလေးက ညမအိပ်လျှင် သူက ထပြီး တယောထိုးပြသည်။ ဂီတက သမီးဖြစ်သူကို အိပ်ပျော်စေမည်ဟု သူကထင်ပြီး တယောထိုးသော်လည်း အက်ဒါက သူငိုချင်သလို ငိုသည်။ အိပ်ချင်မှ အိပ်သည်။ သမီးက မီးလင်းလျှင် မအိပ်ဟုထင်ပြီး ဖယောင်းတိုင်များကို ငြှိမ်းပစ်သည်။ သို့သော် သမီးဖြစ်သူက မအိပ်ဘဲ အော်ငိုသည့်အခါတွင် သူ့ဇာတိစိတ်များ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အုံကြွလာပြီး စာအုပ်များ၊ နာရီများ၊ ဖိနပ်များကို ပစ်ပေါက်သောင်းကျန်းခဲ့မှုများ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဆက်လက် ထွန်းကားနေသော အမျိုးသမီး တားမြစ်နယ်မြေ ယဉ်ကျေးမှု
ကန့်သတ်နယ်မြေဖြစ်သော အထက်ပစ္စယာသို့ အမျိုးသားတို့ တက်ရောက်ခွင့်ကို စိစစ်ခွင့်ပြုနေသော်လည်း အမျိုးသမီးတို့ကိုမူ ပိတ်ပင်ထားသည်။
စတော့ရှယ်ယာမှသည် . . . အောင်မြင်ခြင်း လမ်းမဆီသို့ . . .
လက်ရှိ စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများ၏ ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ အားလုံးသည် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဈေးနှုန်းများထက် လျော့ကျလျက်ရှိပြီး အရောင်းအဝယ်သည်လည်း လျော့သထက် လျော့ကျလာကာ လူတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းသည်လည်း လျော့သထက် လျော့လာနေသည်ဟု ယင်းဈေးကွက် လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူများက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် လူမှုကွန်ရက်၏ အခန်းကဏ္ဍ
“သို့သော်လည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလက ပါတီများ၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး စကားစုများ၊ ခွန်အားဖြည့် စကားစုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ သတင်း အချက်အလက်များ၊ Landscape များ၊ Info-graphic များ မတွေ့ရှိရသေးသည်ကတော့ အမှန်ပင်”
“တစ်ခုခု မပြောခင် အရင်စဉ်းစားပါ။ တစ်ခုခု မစဉ်စားခင် အရင် စာဖတ်ပါ”ဟု အမေရိကန် စာရေးသူ ဖရန်လီဘိုးဝစ်ဇ်က ပြောဖူးပါသည်။ စဉ်းစား တွေးကြံမှုများတိုင်းသည် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သော အရွေ့တစ်ခုကို ဦးတည်စေဖို့ရာ လေ့လာမှု ပြုရပါသည်။
နိုင်ငံရေး စည်းမျဉ်းဟောင်း အားလုံးကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည့် ထရမ့်
ဒေါ်နယ်ထရမ့် နိုင်သွားပြီ။ ပလေးဘွိုင် တစ်ယောက်ကဲ့သို့သော လူနေမှုပုံစံကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ကြွားဝါကျင့်သုံး ပြောဆိုခဲ့သူ၊ ကန်ထရိုက်တာများကို လိမ်ညာခဲ့သူ၊ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သူ၊ ဘုရားကျောင်းမတက်သူ၊ လစ်ဘရယ် အကြောင်းတရားများကို ထွေးပွေ့သူ၊ ဟီလာရီနှင့် ဘီကလင်တန်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သူသည် အမေရိကန်သမိုင်း၏ ဗဟိုချက်များကို ဆုတ်ဖြဲနေပြီ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ စိတ်ပျက်မှုများကို နားလည်သည့် ပေါ်ပြူလာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုယ် ပုံဖော်ပြီး ကြီးကျယ်သည့် အောင်ပွဲကို ထရမ့် ရယူသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
‘ရေအသက် တစ်မနက်’ ဟူသော မြန်မာဆိုရိုးစကားမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရေ၏တန်ဖိုးကို အမြင့်ဆုံး ဖော်ကျူးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ဖော်ကျူးနေရုံ မျှဖြင့် မလုံလောက်ပေ။ အဖိုးတန်ဆုံးသော သဘာဝသယံဇာတကို အခြိုးခြံဆုံး၊ အချွေတာဆုံးနှင့် အကျိုးအရှိဆုံး သုံးစွဲရန် လိုအပ်လှ၏။ ဤသည်မှာ သယံဇာတ ကျင့်ဝတ်ပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကာလဒါန အလှူဖြစ်သည့် ကထိန်လျာ သင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲများကို ကျင်းပလျက်ရှိရာ ဒေသအချို့၏ ကထိန်အလှူမြင်ကွင်း ပုံများကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်၏ မြေဧရိယာ ၄၈၈,၇၉၄ ဧကအနက် သစ်တောနယ်မြေ ၁၈ ခု၊ (၂၃ဝ,၅ဝ၇ ဧက) ရှိပြီး မြို့ဧရိယာ၏ ၄၇ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ ယင်းမြေတို့အနက် ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ဧက ငါးသောင်းကျော်၊ အစုအဖွဲ့ပိုင် စိုက်ခင်းအတွက် ဧက သုံးထောင်ခန့်၊ ပုဂ္ဂလိက သစ်မာ စိုက်ခင်းအတွက် ဧက ၂၅ဝဝ ကျော်နှင့် ပိုးဇာခြံ ဧက ၆ဝ ကို ယခင်အစိုးရ လက်ထက်များတွင် ခွင့်ပြုပေးထားခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့ကြကြောင်း
နှစ် ၂ဝ ကျော် ထိုင်းကျွန်စခန်းမှ မြန်မာခရောင်းလမ်းဆီ
ထိုင်းတို့မြေ ကျွန်စခန်းဆီမှ လွတ်မြောက်လာသည့်တိုင် ကိုကုလားအတွက် ပျော်ရွှင်ရမည့် နေ့ရက်တို့ မပိုင်သေး။ မဆိုင်သေး။ ဘဝ ရပ်တည် ရှင်သန်ရေးအတွက် မြန်မာပြည်တွင် မိတကွဲ ဘတကွဲ၊ မိသားစုကွဲနှင့် ကိုကုလား တစ်ယောက် ခရောင်းလမ်းနေ့ရက်တို့ ဆက်၍ အားတင်းကာ လျှောက်ရပါဦးမည်။
ပရလောက အာဏာပိုင်တွေထဲက အမျိုးသားတွေဆိုလည်း အောက်ခံ စွပ်ကျယ်တောင် အကောင်းစား မဝတ်ကြတော့သလို အမျိုးသမီးတွေ ဆိုလည်း ဘော်လီ မဝတ်ကြတော့ပါဘူး။ နို့ ... ဒါဖြင့် ... အမျိုးသမီးတွေ ဘာဝတ်တုံးဆို။ ဘရာစီယာ ပြောင်းဝတ်ကုန်ကြပါပြီ။ ဒါပါပဲ။ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီဆိုတာ။
မြေဦးခိုက် စပါးဈေး သံသရာ
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ဆိုသည့် ကာလကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မပြောင်းလဲသေးသည်က လယ်သမားတို့၏ ဘဝများ ဖြစ်သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများ၏ ‘တောင်သူဦးကြီးများ’ ဟု ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသည့် လယ်သမား လူမွဲများမှာ ယနေ့အချိန်ထိ ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် မရှိကြသေးပေ။ လယ်သမားများ၏ ဘဝများနည်းတူ မပြောင်းလဲသည့် အစဉ်အလာ တစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။ ယင်းမှာ အခြားမဟုတ်။ စပါးပေါ်ချိန် စပါးဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလေ့ ရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်ဆုမုဆိုး မြန်မာပြည်ဖွား ဒါရိုက်တာ
မီဒီ၏ ရည်မှန်းချက်က အော်စကာဆု မဟုတ်။ ငွေကြေးမဟုတ်။ ဇာတိမြေက လူများအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက ရိုးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုများအကြောင်း၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများ ကြောင်းကို ရိုက်ကူးကာ ကမ္ဘာသို့ တင်ပြရန် ဖြစ်သည်။